Hadii Ay Dheeli Doonan Modric Iyo Kroos & Shirka Jaraa’id Ee Zidane Ka Hor Kulanka PSG Ee UCL %
Zinédine Zidane, tababaraha kooxda kubada cagta Real Madrid, ayaa wuxuu uga waramay saxaafada kulanka ay la balansan yihiin dhigooda reer France, ee PSG, kaasoo ka tirsan lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League.
Zidane, ayaa wuxuu uga hadlay shirkiisa jaraa’id ee ciyaartaan ka hor, waxyaabo badan oo ay kamid yihiin, diyaargarowga kooxdiisa, maqnaanshaha Neymar, ee PSG, xaalka Modric iyo Kroos iyo qodobo kale, oo waa weyn.
Hadaba, saaxiibayaal, waxaan halkaan hoose aan idin kugu soo gudbin doonaa wax walba oo aad uga baahan tahay hadaladii uu sheegay Zidane, intii uu hor-fadhiyay saxaafada, waliba iyagoo dhameystiran ee bogasho wacan.
“Waxaan joognaa Paris – Aniga waxaan ka imid Marseille, Mar walba inaan dib ugu soo laabto France waxay ii tahy farxad iyo wax qaas ii ah, xaaladeyda qaaska ah wax muhiim ah malahan, inkastoo wax arrintu ay tahay sida aan udheelno, waxaana hubaa inaan usocno habeen kubada cagta ku weyn.
“Waxaan isku soo diyaarinay sidii aan la filayn, waxaana diyaarada saareynaa sidii aan udheeli lahayn kulan wanaagsan, kaasoo ah 90 daqiiqo, laga yaabee in la dheelo wax ka badan.
“Maqnaanshaha Neymar wax isbedal ah naguma keeneyso, wali booskeena ayaan joognaa, waxaa jira ciyaaryaha kale, kaasoo doonaya inuu muujiyo waxa uu awoodo, wax yar ayay bedali kartaa, laakiin ma bedali karto diyaar garowga kooxda oo dhan ama teena.
“Labo sano ayaan halkaan joogaa, waxayna tahay mid adag in la maamulo ciyaartoydaan, ciyaaryahan wuxuu doonayaa inuu dheelo, inaan qaato go’aano waa qeyb kamid ah shaqadeyda, waxaana dhihi karaa kooxda aan soo dooran doono Beri aniga ayaa leh dookha.
“Berri waxay ku noqon doontaa labada koox mid adag, laakiin taasi waa kubada cagta, waa waxa aan udoonayo in kubada cagta ay fiicnaato, waxaan u ognahay inaan ku dhibtoon doono dhibaatada, marka waxaan dooneynaa inaan awoodno inaan si fiican ugu dheelo dhibaatada.
“Kooxuhu waxay ka kala yimaadeen dalal si fiican ugu takhasusay kulamadaan oo kale, sanad walba waa mid adag inaad wajahdo koox reer France ah, waxaana qirayaa in maalin un ay koox France ka socota ay ku guuleysan doonto Champions League.
“Qofna kama hooseeyo Boqolkiiba boqol,” ayuu Zinédine Zidane, kusoo gaba gabeeyay hadalkiisa mar wax laga weydiiyay shakiga ku jira inay dheeli karaan ciyaartoyda kala ah Toni Karos iyo Luka Modric, taasoo ka dhigan in ciyaartoydaan ay shaxda koowaad kasoo muuqan doonan.
Champions LeaguePSG vs Real MadridZidane